Ọhụrụ na sinima naanị - ekeresimesi na ndị ahọpụtara: ndị ozi
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! » Ọhụrụ na sinima naanị - ekeresimesi na ndị ahọpụtara: ndị ozi
Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị!
N'ịkọpụta ihe omume zuru ụwa ọnụ nke The Chosen, ekeresimesi na ndị ahọpụtara: ndị ozi, nke mbụ n'ime aha aha a ga-ahụ na cinemas mba niile site na Fathom Events, na-ere ere n'oge ndụ sitere na Dallas Jenkins Tuesday n'abalị, wee mebie ndekọ tupu ire ere maka onye nkesa.
"Ekeresimesi NDỊ ahọpụtara: ndị ozi mebiri ndekọ Fathom Events na $1.5 nde na ahịa n'ime awa iri na abụọ mbụ," Ray Nutt, CEO nke Fathom Events kwuru. "Edobere na mbụ na ụlọ ihe nkiri 12, anyị agbakwunyelarị ebe 1079+ na ọtụtụ puku enyo iji mejuo ọchịchọ na ịtụ anya na ọnụọgụ ndị a ga-aga n'ihu."
Agbapụrụ kpamkpam na nzuzo, ndị ozi na-egosi ọmụmụ Kraịst site n'anya Meri na Josef ma gosipụta ndị na-eme ihe nkiri sitere na usoro Nhọrọ.
Ihe omume a gosikwara ihe ngosi sitere n'aka ndị na-ese ihe na otu Ndị Kraịst pụrụ iche gụnyere Phil Wickham, Maverick City Music, For King and Country, Brandon Lake na ọtụtụ ndị ọzọ.
Ihe omume a na-ewere ọnọdụ na ụlọ ihe nkiri na-amalite Dec. 1. A na-agbakwunye ihuenyo ọhụrụ na ụbọchị egwu egwu iji nweta ihe achọrọ, TheChosen.tv/Christmas ga-enweta ozi kachasị ọhụrụ maka mpaghara gị. Ekeresimesi NDỊ A HỌRỌ: A na-ewepụta ndị ozi site na Fathom Events.
"Mgbe anyị kpebiri ime ihe omume ekeresimesi pụrụ iche, anyị maara na ọ ga-abụ oge kacha mma iji nweta nke a na nnukwu ihuenyo," usoro Onye Okike, Onye edemede na Onye isi Dallas Jenkins kwuru. "Ọ bụ ohere mbụ ndị Fans ahọpụtara ga-ezukọta na mba niile, yabụ anyị bu n'obi ime ka ọ baa uru. Na ndị egwu niile na-enweghị atụ gbakọtara, nke a bụ mmemme zuru oke maka ịkpọ ndị enyi. "
Ndekọ nke ndị na-eme ihe nkiri maka ekeresimesi NDỊ HỌỌRỌ: NDỊ ozi ugbu a gụnyere:
• Egwu Obodo Maverick
• Maka Eze na Obodo
• Ọdọ Mmiri Brandon
• Otu olu egwu ụmụaka
• Ezinụlọ Bonner
• Bryan na Katie Torwalt
• Anyị Alaeze
• Ndị na-eme ihe nkiri sitere na ihe nkedo a họpụtara na-eme monologues:Austin Reed Alleman (Nathaniel) Giavani Cairo (Thaddeus) Luke Dimyan (Judas) Lara Silva (Eden)